खमीर संक्रमणको लागि १२ घरेलू उपचार (उपचार र रोकथाम) - कल्याण | अगस्ट 2021
स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी प्रेस समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> कल्याण >> खमीर संक्रमणको लागि १२ घरेलु उपचार
खमीर संक्रमणको लागि १२ घरेलु उपचार
जबकि खमीर संक्रमण एक सामान्य घटना हुन सक्छ, तिनीहरू पनि कष्टप्रद हुन सक्छन्, र अझ खराब, महिलाको लागि शर्मनाक। यद्यपि गम्भीर संक्रमणलाई डाक्टरको कार्यालयको यात्रा र पर्ची आवश्यक पर्दछ, त्यहाँ काउन्टर विकल्पहरू र खमीर संक्रमणहरूको लागि धेरै घरेलु उपचारहरू छन्। खमीर संक्रमणलाई कसरी चिन्ने, कसरी डाक्टर कहाँ जान, घरमा खमीर संक्रमणको उपचार कसरी गर्ने, र कसरी तिनीहरूलाई दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ जान्नुहोस्।
खमीर संक्रमणको प्रकार
त्यहाँ खमीर संक्रमण को बिभिन्न प्रकारहरु छन्, तर सबै जब शरीर को एक क्षेत्र खमीर जस्तै फ with्गी संक्रमित हुन्छ जब क्यान्डिडा भनिन्छ (खमीर संक्रमण बारे)। यो फg्गस छालाको ओसिलो, तातो, फोल्ड क्षेत्रहरूमा फस्टाउँदछ, जस्तै कोठाहरू, स्तनको मुनि वा बगलहरूमा। क्यान्डिडिआसिस शरीरमा प्राथमिक प्रकारको फ fun्गल संक्रमण हो: यो खमीरले गर्दा हुन्छ र मुख, पेट, घाँटी र योनीमा हुन सक्छ, वर्णन गर्दछ। निकेत सोनपाल , एमडी, न्यूयोर्कमा एक इंटर्नस्ट र ग्यास्ट्रोएन्टेरोलॉजिष्ट। यदि यो औषधीको साथ सही उपचार गरिएको छैन भने, यो नियन्त्रणबाट बाहिर बढ्न सक्छ र तपाइँको मिर्गौला र मुटुलाई संक्रमित गर्न सक्छ।
त्यहाँ कैन्डिडा फgफसका कारण धेरै प्रकारका संक्रमण हुन्छन्, शरीरमा हुने स्थान र क्यान्डिडाको प्रकारको आधारमा। जबकि ती लक्षणहरूमा केहि ओभरल्याप हुन्छन्, तिनीहरूसँग बिभिन्न लक्षणहरू पनि हुन सक्छन्। सब भन्दा साधारण क्यान्डडा संक्रमण हो:
कटानियस कैन्डिडिआसिस शरीरमा छाला संक्रमित हुँदा हुन्छ। क्यान्डिडा बढ्ने सब भन्दा साधारण ठाउँहरू औंलाहरू वा औंलाहरूको बीचको छाला, न nailsहरू, बगल, स्तनको मुनि वा कम्मर वरिपरि हुन्। मुख्य लक्षण रातो, खुजली दाग ​​हो।
डायपर र्याश शिशुहरूमा कहिलेकाँही क्यान्डिडा ओभर ग्रोथको कारण हुन सक्छ, जुन यस्तो हुन्छ जब त्यहाँ ओसिलो डायपरबाट ओसिलो वातावरण हुन्छ जब क्यान्डिडा फस्टाउन सहयोग गर्दछ। छालाको क्रीज र सानो रातो थोप्लाहरू बीच एक रातो दाग देखा पर्छ र संक्रमित क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
ओरल थ्रश जब कैन्डिडिआसिसले मुख वा घाँटीको आवरणलाई असर गर्दछ। ओरल थ्रस गाला भित्र वा जिब्रोमा भित्र सेता घावको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। लक्षणहरुमा दुर्गन्ध, दुखाइ निल्दा दुख, स्वादमा असामान्यता, र मुखको ड्राईनेस (मौखिक खुक्राफको बारेमा अधिक) पनि समावेश हुन सक्छ।
योनि खमीर संक्रमण , यसलाई भल्भोभैग्नल क्यान्डिडिआसिस पनि भनिन्छ, योनिमा क्यान्डिडाको अधिक वृद्धि हुँदा हुन्छ। क्यान्डिडा एल्बिकान्स खमीर संक्रमणको सामान्य फgal्गल तनाव हो। योनी खमीर संक्रमणको लक्षणहरू जलन, खुजली, सूजन, र बाक्लो, सेतो योनी डिस्चार्ज हुन्।
खमीर संक्रमण सामान्य छ र जीवनमा कम्तिमा एक पटक चार मध्ये तीन महिलामा हुन्छन्, डा। सोनपाल भन्छन्। किनकि योनि खमीर संक्रमण प्राय जसो महिलाहरूलाई हुन्छ, यो लेख योनी खमीर संक्रमणको उपचार र रोकथामको लागि मात्र विशिष्ट हुनेछ।
के खमीर संक्रमणको आफैंमा जान सक्छ?
डा। सोनपाल बताउँदछन्, खमीर संक्रमणको हल्का संस्करणहरूमा आफ्नै लागी जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। यद्यपि यो खमीर संक्रमणलाई बेवास्ता गर्न सिफारिस गरिदैन किनकि यो चिकित्सकीय उपचार नगरेमा फिर्ता हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।
जबकि केही व्यक्तिहरूले खमीर संक्रमण वा अधिक काउन्टर उपचारको लागि घरेलु उपचारहरू प्रयोग गर्न छनौट गर्न सक्दछन्, त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जसले डाक्टरलाई भेट्नु पर्छ जब उनीहरूसँग खमीर संक्रमणको लक्षण हुन्छ। यी बिरामीहरूले समावेश गर्दछ:
खमीर संक्रमण र एप्पल साइडर सिरका उपचार
जो पुन: आवर्ती खमीर संक्रमण हो (एक वर्षमा चार वा बढी पटक)
जो सम्भवतः एक यौन संक्रमणको रोग (STD) को संपर्कमा थिए
जो महिला निश्चित छैनन् यदि तिनीहरूको लक्षणहरू खमीर संक्रमणबाट हो
व्यक्ति जोसँग घरेलू उपचार वा ओभर-द-काउन्टर औषधिहरूको साथ सफलता छैन
अनियन्त्रित मधुमेह भएका बिरामीहरू वा एचआईभी जस्ता अवस्थाहरूका कारण कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली
डाक्टरले खमीर संक्रमणको लागि के सल्लाह दिन सक्छ?
ओभर-द-काउन्टर एन्टिफंगल औषधिहरूले खमीर संक्रमणहरूको उपचार गर्दछ र आन्तरिक अनुप्रयोगको लागि क्रिम वा सपोसिटरीमा उपलब्ध छन्। खमीर संक्रमण तीन दिन देखि दुई हप्ता सम्म रहन सक्छ, त्यसैले एक दिन, तीन दिन, वा हप्ता लामो उपचार उपलब्ध छन्।
त्यहाँ ईन्टी-ईन्च एन्टिफंगल क्रीमहरू पनि छन् जुन बाह्य खुजलीमा मद्दत गर्न धेरै उपचारहरू साथ आउँदछ। योनि खमीर संक्रमणको उपचार गर्नको लागि एन्टिफंगल क्रीमको सबैभन्दा लोकप्रिय ब्रान्ड होमोनिस्ट्याट(मोनिस्ट्याट कुपन प्राप्त गर्नुहोस् | मोनिस्ट्याट भनेको के हो?) वा वागीस्ट्याट। यी उपचारहरू अनलाइन उपलब्ध भएकाहरूका लागि उपलब्ध छन् जो स्टोरमा खरीद गर्न असहज छन्।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तोक्न सक्दछडिफ्लुकन (डिफ्लुकन कुपनहरू | डिफ्लुकान विवरण)फ्लुकोनाजोल ( fluconazole कुपन |fluconazole विवरण)एक ट्याब्लेट जसले फgal्गाल योनी संक्रमणको उपचार गर्दछ, वा प्रिस्क्रिप्शन एन्टिफंगल जस्तै टेरकोनाजोल (Tersonazole कुपनहरू |terponazole विवरण), जुन सुत्ने समयमा आन्तरिक रूपमा सम्मिलित छ।
सिंगलकेयर प्रिस्क्रिप्शन डिस्काउंट कार्ड पाउनुहोस्
खमीर संक्रमणको लागि घरेलु उपचार
त्यहाँ खमीर संक्रमणको उपचार गर्ने प्राकृतिक तरिकाहरू छन्। यी खमीर संक्रमणहरूको लागि घरेलु उपचार अधिक प्राकृतिक, विवेकपूर्ण मार्गमा जान चाहनेहरूको लागि उपयुक्त छ।
१. एप्पल साइडर सिरका
एप्पल साइडर सिरका क्यान्डिडा अल्बिकान्सको बृद्धिलाई रोकथाम गरिएको छ, फgi्गलको तनाव जसले खमीर संक्रमणको कारण गर्दछ।
यो प्राकृतिक उपचार प्रयोग गर्न, नुहाउनुहोस् र एप्पल साइडर सिरकाको आधा कप थप्नुहोस् र कम्तीमा २० मिनेटको लागि नुहाउनुहोस्।
एप्पल साइडर सिरका पूर्ण शक्तिमा कहिले प्रयोग नगर्नुहोस्। एप्पल साइडरले ब्याक्टेरियाहरू र फgi्गर मार्न सक्ने क्षमताको कारणले यसले शरीरमा स्वस्थ ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्न सक्छ। यसको उपयोग गर्नु अघि स्याउ साइडर सिरका पातलो गर्नुहोस्।
२. बोरिक एसिड
बोरिक एसिडको योनि सपोसिटरीजले खमीर संक्रमणको उपचार गर्दछ किनकि बोरिक एसिडको एन्टिसेप्टिक गुणहरू छन्। जबकि अनुसन्धान समर्थन गर्दछ यी सपोसिटरीहरूको प्रयोग, यो निष्कर्षमा पुग्दछ कि यो केवल खमीर संक्रमणहरूको उपचारको लागि बारम्बार र हार्डको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। किनभने बोरिक एसिड यति शक्तिशाली छ, हल्का उपचार पहिले प्रयोग गर्नुपर्दछ।
C. नरिवल तेल
नरिवलको मासुबाट निकालिएको नरिवल तेलमा प्राकृतिक रूपमा एन्टिफंगल गुणहरू हुन्छन्। A वैज्ञानिक अध्ययन फेला परेको नरिवल तेलले खमीर संक्रमणको कारण हुने क्यान्डिडा ब्याक्टेरियालाई रोक्न मद्दत गर्दछ। यो उपचार को उपयोग गर्न को लागी प्रभावित क्षेत्र मा नारियल तेल लागू गर्नुहोस्।
C. क्रैनबेरी जुस वा गोली
क्रैनबेरी जुस सहयोगका लागि भेटिएको छ मूत्र पथ संक्रमण क्यान्डिडा अल्बिकान्स (खमीर संक्रमणको कारण हुने फg्गस) को गठन रोक्दै। जबकि अध्ययनहरूले योनिको कैन्डिडा अल्बिकान्सलाई निको पार्न मद्दत गर्ने यसको क्षमता देखाउँदैन, केही महिलाले नतीजाको दाबी गर्छन्। क्रैनबेरी जुस र पिल्स भिटामिन सीमा पनि धेरै हुन्छन्, जसले संक्रमणलाई रोक्न पनि मद्दत गर्दछ।
ओभर-द-काउन्टर डुचेस खमीर संक्रमणको लड्न सक्छ र सूजन र जलन कम गर्दछ। यद्यपि धेरै अध्ययन डचिंगको प्रतिकूल प्रभावहरू देखाउनुहोस्, र केही अध्ययनहरूले सकारात्मक परिणाम दिन्छन्। यस अनुसार महिला स्वास्थ्य को कार्यालय , डाक्टरहरूले सुझाव दिन्छ कि महिलाले डच नगर्नु किनभने डचिंग गर्नाले गर्भवती, योनि संक्रमण, र यौन संक्रमित संक्रमण (एसटीआई) को समस्या निम्त्याउन सक्छ।
लसुन र लसुनको तेल प्रख्यात एन्टिफंगल एजेन्टहरू हुन्। अध्ययन यसलाई क्यान्डिडा एल्बिकान्स बिरूद्ध एन्टिफंगल गतिविधि पनि भेट्टाएको छ। जबकि अधिक परम्परागत दृष्टिकोणले योनीमा लसुनको लौंग घुसाउन सिफारिस गर्न सक्छ, कम आक्रमण गर्ने दृष्टिकोण भनेको खानामा थप ताजा लसुन थप्नु हो र यसलाई थप खानामा समावेश गर्नु हो।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक हो कडा एन्टीसेप्टिक त्यो खमीर मार्न भेटाइएको छ। यो खमीरको योनी संक्रमण प्रकारहरूमा विशेष रूपमा अध्ययन गरिएको छैन। योनीमा लागू गर्नु अघि, पहिले हाइड्रोजन पेरोक्साइड पातलो गर्न नबिर्सनुहोस्।
O. ओरेगानो तेल
Oregano तेल, वा ओरिग्नम तेल, देखाइएको छ विकास रोक्नुहोस् कैन्डिडा अल्बिकान्सको। ओरेगानो तेल प्रयोग गर्नका लागि वाहक एजेन्टमा केहि थोपाहरूको प्रयोग गर्नुहोस्, जस्तै नरिवल तेल वा जैतुनको तेल, र प्रभावित क्षेत्रमा लागू गर्नुहोस्।
प्रोबायोटिक्स जीवाणुहरू जस्तै जीवाणुहरू समावेश गर्दछ ल्याक्टोबसिलस एसिडोफिलस , जसले योनीमा ब्याक्टेरियाहरूको स्वस्थ सन्तुलन जगाउन सहयोग गर्दछ।तिनीहरूले उपचार वा रोक्न सक्छन् जीवाणु वाहिनोसिस र खमिर संक्रमण बाहेक मूत्र पथ संक्रमण।
अनलाइन वा स्टोरहरूमा प्रोबायोटिक पूरकहरू खरीद गर्नुहोस्। परिणामहरू देखाउन यी मौखिक पूरकहरू १० दिन लिन सक्दछ। परिणामका लागि समयको लम्बाइ कम गर्न केही महिलाहरूले प्रोबियोटिकहरू योनी सपोसिटरीजको रूपमा प्रयोग गर्छिन्। दही खानु (प्रत्यक्ष र सक्रिय संस्कृतिहरूको साथ) प्रोबियोटिक सेवन बढाउने अर्को राम्रो तरिका हो।
यद्यपि धेरै प्राकृतिक उपचारहरू जस्तै, त्यहाँ प्रमाणहरूको अभाव छ कि प्रोबायोटिक्सले खमीर संक्रमणहरूलाई निको पार्छ। अन्वेषकहरूले अझै खमीर संक्रमणको लागि प्रोबायोटिक्स अध्ययन गरिरहेका छन्, तर धेरै डाक्टरहरूले जब कुनै एन्टिबायोटिक सिफारिस गरिएको हुन्छ, एक लिने सल्लाह दिन्छन् खमीर संक्रमण एन्टिबायोटिकको सम्भावित साइड इफेक्ट हो ।
सम्बन्धित: कुन प्रोबायोटिकहरू उत्तम हुन् सिक्नुहोस्
१० चिया रूखको तेल
चिया रूखको तेल एन्टिफंगल गुणहरू सहितको एक अत्यावश्यक तेल हो, जुन केही मानिसहरूले खमीर संक्रमणलाई निको पार्ने दावी गर्छन्। यो द्वारा काम गर्दछ सेल भित्ताहरु मार्दै र खमीर को झिल्ली। जबकि अधिक अध्ययनको आवश्यक छ, २०१ 2015 को अध्ययन फेला पारे कि चिया रूखको तेल भएको योनी सपोसिटरीहरूले फgic्गीसाइडल एजेन्टको रूपमा काम गर्न सक्दछन् यसैले क्यान्डिडा अल्बिकान्सलाई मार्दछ।
सबै आवश्यक तेलहरूको रूपमा, यसमा शरीरमा प्रयोग गर्दा क्यारियर तेलको साथ चिया रूखको तेलको केही थोपाहरू प्रयोग गर्नुहोस्। महिलाले चिया रूखको तेलको साथ योनि सपोसिटरीहरू खरीद गर्न सक्दछन्।
११. भिटामिन सी
भिटामिन सी (भिटामिन सी कूपन | भिटामिन सी के हो?) शरीरको प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ र, एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणालीको साथ, शरीर खमीर संक्रमण राम्रोसँग लड्न सक्षम छ। पूरक सेवन गरेर वा भिटामिन सी-समृद्ध फलहरू र सुन्तला र ब्रोकोली जस्ता सब्जीहरू खाएर अधिक भिटामिन सी थप्नुहोस्।
दही (प्रत्यक्ष र सक्रिय संस्कृतिहरूको साथ) खमीर संक्रमणको उपचार गर्ने राम्रो तरिका योको उच्च प्रोबायोटिक केन्द्रितको कारण हो। माथि उल्लेख गरिएझैं प्रोबायोटिक्सले क्यान्डिडा एल्बिकनलाई लड्न मद्दत गर्न सक्छ। A भर्खरको अध्ययन फेला पार्‍यो कि दहीको इन्जेशनले प्रोबियोटिक्स समावेश गर्दछ ल्याक्टोबसिलस एसिडोफिलस खमीरको वृद्धिलाई दबाउन मद्दत गर्दछ। प्रोबियोटिक्सको साथ दही खानले खमीर संक्रमणलाई सुधार गर्न सक्दछ, केही महिलाले दहीमा टेम्पन भिजाएर र योनी घुसाउँदा पनि राहत पाउँछन्, यसलाई बारम्बार परिवर्तन गर्ने सम्झना राख्छन्। यस प्रविधिको साथ मात्र सादा, स्वेइटेन्ड दही वा अनवेट ग्रीस दही प्रयोग गर्नुहोस्। चिनी भएको दहीले क्यान्डिडालाई बढ्न र फलाउन मद्दत गर्दछ।
कसरी खमीर संक्रमण रोकथाम गर्न
खमीर संक्रमणलाई रोक्न धेरै तरिकाहरू छन्।
कहिलेसम्म तिमीलाई चिसो लाग्न सक्छ?
अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोगबाट बच्नुहोस्। एन्टिबायोटिकले योनीको स्वस्थ ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्दछ, खमीरको अत्यधिक वृद्धि गराउँछ, जसले खमीरमा संक्रमण निम्त्याउँछ।
कपासको लुगा लगाउनुहोस्। लुज-फिटिंग, कपास अण्डरवियर स्वस्थ माइक्रोबायोमको लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ। कपडा बेवास्ता गर्नुहोस् जुन तंग छ र सास फेर्न सकिदैन, जस्तै लेगिंगहरू। यी लुगाहरूले एक आर्द्र, ओसिलो क्षेत्र सिर्जना गर्न सक्दछ, जुन कन्डिडा अत्यधिक वृद्धिको लागि आदर्श वातावरण हो। यसको कारणले गर्दा, यो भीम वा पसिना लुगाबाट वर्कआउट लुगा वा स्विमवेयर जस्तै छिटो परिवर्तन गर्नु महत्वपूर्ण छ।
तातो टब र स्केल्डिंग तातो स्नान बेवास्ता गर्नुहोस्,जुन उम्मेदवार बृद्धि, तातो, चिसो वातावरण को कारण।
प्रोबायोटिक्स लिनुहोस्वा दही खानुप्रोबायोटिक्सको साथ उनीहरूले योनीको माइक्रोफ्लोरा सन्तुलित गर्न मद्दत गर्दछ। खमीर संक्रमणको लागि उपचारको रूपमा, प्रोबायोटिक्स खमीर संक्रमणको रोकथाममा मद्दत गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो प्रोबायोटिक लिनु पर्नेसँग हुनेछ ल्याक्टोबिसिलस राम्नोसस जीआर -१ ब्याक्टेरिया ।
यस्तो ख्याल नगर्नुहोस् जुन खमीर संक्रमणमा निम्त्याउन सक्छ, जस्तै कमजोर स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता अभ्यासहरू गर्दा, बेवास्ता गर्नुहोस् डचिंग, सुगन्धित योनी धुने वा सुगन्धित लोशन, साथ साथै अत्तरयुक्त सेनेटरी उत्पादनहरू जननेन्द्रियको नजिक, जसले योनीको माइक्रोफ्लोराको सन्तुलन हटाउन सक्छ।
चिनी र प्रशोधित खाद्य पदार्थहरू वेवास्ता गर्नुहोस् । खमीर चिनीबाट बढ्छ, त्यसैले यो खमीर वृद्धि को अधिशेष हुन सक्छ।
आवर्ती खमीर संक्रमणको कारणहरू
केही महिलाहरू अरूहरू भन्दा यीस्ट इन्फेक्सनको लागि बढी संवेदनशील हुन्छन् र तिनीहरूलाई दोहोरिने खमीर संक्रमण वा पुरानो खमीर संक्रमण हुनेछ। त्यहाँ केही सम्भावित कारणहरू छन् जुन कसैले बारम्बार खमीर संक्रमणको सामना गर्न सक्छ:
यौन गतिविधि । जबकि खमीर संक्रमण एक यौन संक्रमित संक्रमण (एसटीआई) होईन, साझेदारहरूले एक अर्कामा क्यान्डिडा पास गर्न सम्भव छ। यसलाई रोक्नको लागि कन्डम वा दन्त बाँध प्रयोग गर्नुहोस् र राम्रो नुहाउने अभ्यास गर्नुहोला, जस्तै नुहाउनु। जब एक पार्टनरसँग खमीर संक्रमण हुन्छ तब सम्भोगबाट बच्नुहोस्।
मूल खमीर संक्रमण पूर्ण रूपमा उपचार गरिएको थिएन वा खमीर संक्रमणaको कारणले हुन्छ औषधि प्रतिरोधी तनाव । संक्रमण पूर्ण उपचार हुनु अघि लक्षणहरू हराउन सक्छ। जब यो हुन्छ, खमीर संक्रमण फिर्ता आउनेछ। त्यहाँ खमीरका तानाहरू पनि छन् जुन अधिक औषधी प्रतिरोधी छ, जसले अरूलाई भन्दा छुटकारा पाउन गाह्रो बनाउँछ।
यो खमीर संक्रमण होईन। त्यहाँ अन्य संक्रमणहरू छन्, जस्तै ब्याक्टेरिया वाहिनीसिस, वा एसटीआई, जसमा समान लक्षणहरू हुन सक्छन्। यो डाक्टरलाई भेट्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारणहरू मध्ये एक हो, जस्तै स्त्री रोग विशेषज्ञ वा प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक, जब खमीर संक्रमण स्पष्ट हुँदैन।
ती केहि शर्तहरु संग, जस्तै बिरामी प्रतिरक्षा प्रणालीहरू , गर्भावस्था ,वा अनियन्त्रित मधुमेह ,खमीर संक्रमणको बढी संवेदनशील हुन्छन्।
यिनीहरूले मद्दत गर्न सक्दछन्, खमीर संक्रमणको लागि घरेलु उपचारहरू संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन द्वारा नियमित छैन। परिणाम फरक-फरक हुन्छन्। यदि लक्षणहरू केहि दिन भित्र समाधान भएन भने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई अवश्य हेर्नुहोस्।
Coumadin vs. हेपेरिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
एक COVID-19 संसारमा सुरक्षित रूपमा गर्मीको मजा कसरी लिने
तपाईं कसरी अक्सर अफ्रिन नाक स्प्रे प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
चिसो औषधी वाह्य नाक सुख्खा गर्न
सिरका मा खुट्टा भिजेको फफसलाई मार्नेछ
सबै खाने विकारहरूको लागि शुरुआतको औसत आयु उमेरको वर्ष हो।
तपाईं वयस्कहरूको लागि वैकल्पिक tlenlen र आइबुप्रोफेन गर्न सक्नुहुन्छ
काउन्टर माथि मतली को लागी उत्तम औषधि
अमेरिकामा अधिक वजन र मोटोपनको तथ्या statistics्क